आफैँले को-रोना परीक्षण गर्न मिल्ने किट तयार भयाे अब हरेक पसलमा उपलब्ध हुने ! - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियआफैँले को-रोना परीक्षण गर्न मिल्ने किट तयार भयाे अब हरेक पसलमा उपलब्ध हुने !
आफैँले को-रोना परीक्षण गर्न मिल्ने किट तयार भयाे अब हरेक पसलमा उपलब्ध हुने !
आफैँले को-रोना परीक्षण गर्न मिल्ने किट तयार भयाे अब हरेक पसलमा उपलब्ध हुने ! दक्षिण कोरियाले को- रोना सङ्क्रमण भए नभएको थाहा पाउन आफैँले परीक्षण गर्न मिल्ने किट निर्माण गरेको छ । किट यहाँका २ औषधि निर्माता कम्पनी हुमासिस र एसडी बायोसेन्सरले निर्माण गरेका हुन् ।
यो किटमार्फत आफूलाई को- रोना लागेको शङ्का लागेमा घरमै बसेर आफ्नो परीक्षण गरी निश्चित हुन सकिन्छ । घरमै बसी आफ्नो स्वाबमार्फत परीक्षण गरिने यो किटले परिक्षण गरेको १५ मिनेटमै को- रोना भाइरस लागे नलागेको पत्ता लगाउन सकिन्छ । यतिमात्र नभई यो किट अब हरेक २४ घण्टे पसलहरूमा सहजै उपलब्ध हुने भएको छ ।
यहाँका जी एस–२५, सेभेन इलाभेन, इ–मार्टलगायत २४ घण्टे पसल बाटै सजिलै खरिद गर्न सकिने उक्त किटको खुद्रा मूल्य १० हजार कोरियन वन अर्थात झण्डै १ हजार नेपाली रुपैयाँ पर्छ । यसको सहायताले अब प्रयोगकर्ताले सहजै आफ्नो नतिजा थाहा पाई सकारात्मक आए सेल्फ आइसोलेशन बस्ने तथा थप पिसिआर जाँच गरी स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन सक्नेछन् ।
कोरियामा पछिल्लो समय को- रोना भाइरसको प्रकोप थप बढ्न थालेपछि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन उक्त नीति अबलम्बन गरेको बताईएको छ । काेराे-ना भा- ईरस ( काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ अनिबार्य रुप मा माक्स को प्रयोग गरौं साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।